Mararka qaar Macs ma ahan kuwa caqli badan | Martech Zone
Mararka qaarkood Macs maahan kuwa caqli badan
Arbacada, Maarso 28, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aan weydiiyo aqoonyahan kasta oo tiknoolaji ah nooca faylka dhawaaqa aasaasiga ah ee internetka iyo wixii ka baxsan, waa inay dhahaan MP3. Waa halbeeg heer sare ah oo la tuujiyey oo ilaalinaya tayada codka ay dadku maqlaan. Taasi waxay tiri, haddii aan ahaan lahaa Apple (ama Microsoft), waxaan u maleynayaa inaan u soo bandhigi lahaa MP3 feyl caadi ah oo u dhexeeya barnaamijyadeyda
Nooca feylka ee caadiga ah ee Apple ayaa ah aiff. Ma maqashay midkoodna? Ilaa aad ka shaqeyneyso Mac mooyee, malaha maya.
Adiga Mac gurus ah, madaxayga waan ka bixi karaa Fadlan i sax haddii aan khaldanahay, laakiin waxaan soo maray dhowr barnaamijyo ka hor inta aanan fahmin sida loo beddelo mid aiff u fayl MP3
Heesta Muusiga Nope.
Quicktime Pro? Maya
Marka waxaan u sameeyaa xoogaa Googling ah aiff ilaa mp3 oo waxaad ka heleysaa farabadan maqaalo ku saabsan adeegsiga iTunes (Waad ogtahay, barnaamijkaas BILAASH AH) waana suurtagal inay macquul tahay. Waxaad kaliya dejineysaa dejinta Soo-dejinta si aad u soo dejiso faylasha nooca faylka MP3 ah.
Qabow! Marka waxaan soo dhoofiyaa feylkii aan ku duubay iTunes, voila! Ummm vo no voila.
Tani runti waxay bilaabaysaa inay nuugto.
Ugu dambayntii waxaan ku dhacaa inaan xaq-u-riixo feylka codka ee iTunes-ka waana arkaa… halkaa waa isU beddelo MP3. Ilaahay wuu i jecel yahay. Adduunku waa cadaalad. Saacad kadib, ugu dambayntii waan awoodaa inaan badalo feylkayga. La dhammeeyay!
Hada hadaan ogaan lahaa halka ay dhigeyso…
Waxaan aakhirkii gartay sida loo nuqulo MP3 file ka iTunes oo ku dheji on my site. Kaliya waan ogahay in RIAA ayaa ka dambeeya sidan. Ma rumaysan karo in codsi kasta oo cod casri ahi aanu lahayn muuqaal muuqda oo ah inuu la shaqeeyo MP3-yada ama uu si toos ah ugu dhoofiyo MP3-yada. Jees jees
Farriinta 500aad ee Farxad leh Adiga!
Waxay igu qaadatay wakhti yar in aan ogaado sida loogu beddelo MP3 sidoo kale mac.
Faylka waa inuu ku jiraa diiwaankaaga muusiga ee iTunes-kaaga. Laakiin sida ugu fudud ayaa ah inaad faylkaas si toos ah ugala soo baxdo liiska 'iTunes' ee loo yaqaan 'iTunes playlist' illaa desktopkaaga ama wixii fayl ah. 😉
Aad u qosol badan. Yuu lahaa thunk inuu kaliya jiido?
Taasi waa haddii aad ka beddeshay kaydinta soo dejinta aasaasiga ah ee iTunes - AAC illaa mp3.
Waxaan u maleynayaa in arinta ku saabsan badalashada mp3 ay waxbadan ka qabaneyso xuquuqda mp3. Waxay umuuqataa inaan aqriyay meel in koodhku laga ilaaliyo barnaamijka tafaariiqda. Waxaan u maleynayaa inay taasi sax tahay. Fadlan i sax haddii aan khaldanahay.
"Hadda haddaan ogaan lahaa halka ay dhigeyso?"
Ka waran saxda-riixida wadada mar labaad oo dooro "Show in Finder"?
Caqli badan, haddaad i weydiin lahayd 😉
Ma u sheegi kartaa inaan ahay iTunes cusubby, Tibor? Mahadsanid! Haa, waan niyad jabay oo waan caayay… waayo-aragnimada isticmaale ee OSX waa mid caqli badan. (U beddelashada MP3 maahan, in kastoo!)
Doug: Inta badan way fududahay markaa waad filan lahayd, waxaan dhihi lahaa. Laakiin waan ku raacsanahay: sida iTunes (iyo iPhoto, arrintaa) u maareeyaan waxyaabaha qaarkood waxay noqon kartaa wax yar oo wareer ah.
… Iyo goorta Googling, adeegsiga xigashooyinka caqliga leh ay caawin karaan:
"Aiff ilaa mp3" osx
Siinaya natiijooyin fiican.
Maalinta nacaska ee Abriil 🙂
.aiff waa qaab aan ku cadaadinayn codka. Waa kuwee weyn haddii aad si xirfad leh ula shaqeyso codka (sida in yar oo ka mid ah dadka isticmaala mac-du ay sameeyaan; ka dib sawirada iyo fiidiyaha, codka-tafatirka waa barnaamijka 3-aad ee loogu isticmaalka badan yahay Mac-yada).
Taasi waxay tidhi, Aad ayaan u bad badiyay in QT uusan u beddelayn MP3.
Haddii aad ubaahantahay inaad ubadasho feylasha codka si joogto ah, waxaan kugula talin karaa barnaamijka $ 10 Qalabka Sound.
Markaad raadineyso barnaamijka 'Mac', waxaan kugula talin lahaa Cusbooneysiinta Mac in ka badan Google.
Iyadoo la raacayo cinwaanka gelitaanka degelkan:
Waxyaabo badan oo badan ayaa ii kaxeeya nuts ku saabsan macs. Waxaan isticmaalayay labada nidaamba sanado hada hadana waxaan u arkaa inaan naftayda uqalmo inaan sameeyo noocyadan maamul. Waan xanaaqsanahay markii badhanka daaqada “Ballaariyo” uu daaqadaha ka dhigo mid waxyar uun ka weyn. Sidoo kale, muxuu heck u kari waayey inaan jiido gees kasta oo daaqada si aan u qiyaaso? Muxuuse furaha tirtirku u shaqeyn la’yahay sida furaha tirtirka dhabta ah u shaqeyn lahaa?
Waxaan mar daawaday naqshadeeye ruug-caddaa ah oo daminaya G3 sababta oo ah badhanka korontadu wuxuu umuuqday badhanka galka cd. Naqshad dareen leh malaha maya.
Waan sii socon karay on